हामी आफैंले पनि आफूप्रति गद्धारी नगरौं
[2015-05-14 오후 10:46:00]
गत वैशाख १२ र २९ गते नेपालमा विनासकारी भूकम्प गयो । भूकम्प नेपालमा गएको हो, तर यसको मानसिक असर संसारभरिका नेपाली र नेपालीलाई माया गर्ने सबैलाई परेको छ । यस भूकम्पले नेपालमा अकल्पनीय क्षति भएको छ । नेपाललाई चिनाउने कैयौं प्राचीन ऐतिहासिक सम्पदाहरुसमेत धरासयी भए ।
मानवीय क्षति अपुरणीय हुन्छ, किनभने यस्तो क्षतिको पूर्णता कहीं र कसैबाट हुन सक्तैन । तर हाम्रो भौतिक क्षति पूर्ण गर्न भने देशभित्रका मनकारीहरु र संसारभरिका व्यक्ति, संघसंस्था र सरकार समेत लागि परेका छन् । समाचार माध्यमबाट प्राप्त समाचारमा उल्लेख भए अनुरुप सम्पूर्ण नेपालीहरुको एकअर्काप्रतिको माया, प्रेम र सदभाव अपरिमेय देखियो । अर्कातिर विदेशीहरुले समेत नेपाललाई माया गरेको, सद्भाव राखेको र सहयोग गरेको सुन्दा र पढ्दा यस विपत्तिका बेला हरेक नेपालीको मनोवलमा वृद्धि भएको छ । यसो हुनु भनेको नेपाल र नेपालीले विश्वमाझ बनाएको सकारात्मक पहिचान हो ।
प्रकृतिले अनायस देखाएको यस विनासलीलामा परेर परिवारजन र आफन्त गुमाउनेहरुको पीडा कहिल्यै निको नहुने घाउ बनेको छ । यस दुखद अवस्थाको जति रोदन पोखे पनि मन शान्त हुँदैन । तर नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरुको सुरक्षित र बलियो निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ ।
यस्तो राष्ट्रिय सङ्कटका बेला सरकारको ज्यादै ठूलो महत्व हुँदो रहेछ । हाम्रो देशको सरकारले पनि यस विपत्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । नेपाली सेना, सशत्र प्रहरी र जनपद प्रहरी समेतले ज्यानको बाजी राख्दै अहोरात्र खटेर नेपाली जनताको उद्धार गरेको कार्य स्तुत्य छ । लोभानी पापानीबाट धेरै टाढा बसेका यी सरकारी संयन्त्रहरुप्रति हामी सम्पूर्ण नेपालीले गर्व गर्नु पर्छ । हामीले नै चुनेर पठाएको सरकारलाई विश्वास गरेर सघाउनुको विकल्प पनि हामीसँग अहिले छैन । यसै सन्दर्भमा यस विकटको घडीमा हाम्रा मित्रराष्ट्रहरुले असल नियतले गरेको हार्दिक सहयोग पनि हामी नेपालीका लागि अविष्मरणीय बनेको छ ।
१९९० सालको भूकम्पमा पनि तत्कालीन समय सापेक्षताको हिसाबले जनधनको निकै ठूलो क्षति भएको इतिहास हामीसँग छ । तर अहिलेका हामी नेपालीमध्ये अधिकांशका लागि त्यसबेलाको विध्वंश किंवदन्तीजस्तो थियो । २०४५ साल र २०६८ सालका भूकम्पले हामी नेपालीलाई भूकम्पको पीडादायी स्वाद केही मात्रामा चखाएकै हो । तर ती भूकम्पहरुबाट पनि हामीले खासै शिक्षा लिएनौं नै । हुन त त्यसपछि नै खास गरेर काठमाडौं केन्द्रीत भएर भूकम्प प्रतिरोधात्मक गृह निर्माणको प्रक्रिया फाट्टफुट्ट रुपमा चल्दै आएको हो । तर त्यसले व्यापकता पाउन भने सकेको थिएन ।
हाम्रो देश नेपालमा कहिल्यै पनि विधिको शासन व्यवस्था हुन नसकेको कुरा सर्वविदितै छ । विधिपूर्णको राज्यव्यवस्था नभएको देशमा राष्ट्रिय विपद् परेपछि जताततै अन्योलको अवस्थाले छोप्नु अनौठो होइन । यसर्थ पनि अहिलेको राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा हाम्रो सरकारी निकायबाट जेजति सक्रियता भएको छ त्यसलाई धन्य भन्नु पर्छ ।
अहिलेको नेपालको यस राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा सरकारको अन्ध आलोचना गर्नु भनेको निन्दनीय कार्य हो । अनि यस्तो अवस्थामा पनि सरकारको नेतृत्वतहमा भएका अथवा कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले नियतवश देश र जनताको अहितमा काम गर्छन् भने तिनलाई राष्ट्रद्रोही अपराधी नै घोषित गरेर कठोर भन्दा कठोर सजाय नै दिइनु पर्छ । अर्थात् जनअपेक्षा अनुरुप वर्तमान सरकारले आफूलाई इमान्दारिताको कसीमा निखार्नु पर्छ । सरकारमा बसेका मानिसहरुले असल नियत राखेर, पारदर्शी रुपमा आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु पर्छ । गल्ती भएको अवस्थामा जनताले माफ गर्न सक्ने छन् । तर अपराध भएको अवस्थामा अब सहृय हुने छैन । हिंजोका सरकारी क्रियाकलापका आधारमा सरकारलाई पूर्णरुपले विश्वास गर्ने आधार नभएको पक्कै हो । तर हामीले नै निर्माण गरेको सरकारलाई विश्वास नगरेर सरकार बाहिरकालाई कसरी र किन विश्वास गर्ने - 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको' भन्ने उखानलाई हाम्रो नेपालको सरकारमा बस्नेले चरितार्थ पार्दै आएका छन् । नेपाल र नेपाली जनताको यत्ति ठूलो विपत्ति देखिसकेपछि वर्तमान सरकार नै रत्नाकर डाकुबाट वाल्मीकि ऋषिमा अनुवाद अथवा परिणत हुनसक्छ । यही आशा एवम् विश्वासका साथ यसबेला हामी सबैले कर्म क्षेत्रमा लाग्नु हामी नेपालीका लागि हितकारक हुनेछ ।
हाम्रो देश नेपाल नै संसारमा एउटा यस्तो मुलुक हो जुन देश कहिल्यै अर्कोदेशको उपनिवेश भएको छैन । त्यसैले हामी नेपालीले देश नहुनुको पीडा कहिल्यै भोग्नु परेको पनि छैन । माओवादी द्वन्द्वमा आफ्नै देशभित्र विस्थापित हुन वाध्य भए बाहेक अर्को देशबाट हामीले लघारिनु परेको छैन । तर आजसम्मको हाम्रो राज्य व्यवस्थाको गैर जिम्मेवारीपनाका कारण नै सम्पूर्ण नेपालको बसोबास भने बेथितिपूर्णको नै छ । अहिलेको भूकम्पीय जोखिममा पनि तिनै अव्यवस्थित बसोबासमा बाँच्न वाध्य गरीबीको रेखामुनी रहेका जनधन कै अधिकांश रुपमा र्सवनास भएको छ । नेपालको इतिहासलाई साक्षी राखेर भन्नुपर्दा कुनै पनि राज्यव्यवस्थाले आम नागरिकको जिउधनको सुरक्षाका विषयमा कहिल्यै सोचेको अथवा तिनको असल व्यवस्थापनमा पहल गरेको पाइँदैन । सत्ता सम्हाल्नेहरुले नीजिस्वार्थ भन्दामाथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थका सन्दर्भमा कहिल्यै काम गरेको देखिंदैन । नेपाल भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेको कुरा सर्वविदित हुँदाहुँदै पनि केही अन्तरराष्ट्रिय सामाजिक संस्थाहरुद्वारा डलरको खेती मौलाउनका लागि गरिएको विपद व्यवस्थापनका नाटकीय काम बाहेक आम जनताका सर्न्दर्भमा केही भएको नै थिएन । यसको प्रत्यक्ष प्रमाणका रुपमा हालै भएको विध्वंश नै पर्याप्त पनि छ ।
विगतका तीता कुरा कोट्याएर मुख कोक्याउँदै अहिलेको महत्वपूर्ण समयमा मुड्कीले टेबुल बजार्नुको कुनै अर्थ छैन । यसै परिप्रेक्ष्यमा त्यसबेला काम नगर्नेहरु जतिमात्रामा दोषी छन् नगराउने हामी सबै पनि उत्तिकै दोषी छौं । त्यसैले हिंजो के भयो के भएन भन्ने कुराको चर्चा गरेर समय फाल्नु भन्दा पनि आज, अहिले र अब के के गर्न सकिन्छ, के के गर्नु पर्छ र कसरी गर्नु पर्छ भनेर गरिहाल्ने समयमा हामी आइपुगेका छौं ।
यसपालीको भूइँचालोमा जनघनत्वका हिसाबले काठमाडौंमा भएको धनजनको क्षति न्यून हो । काठमाडौं बासीले तर् इश्वरलाई धन्यवाद नै दिनु पर्छ । किनभने यदि वैशाख १२ गतेको भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखाको बारपाकको साटो काठमाडौं भएको भए अहिले सिन्धुपाल्चोक र गोरखाले भोग्नु परेको विनासको तुलनामा अत्यधिक र अकल्पनीय विनास काठमाडौंले भोग्नु पर्ने निश्चित थियो । त्यसैले यसबेला सरकारले अल्पकालीन योजनाका रुपमा भूकम्पग्रस्थ क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन रुपमा सम्पूर्ण देश र खास गरेर राजधानी काठमाडौंको व्यवस्थापन गर्न समेत विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
एकातिर उच्च भूकम्पीय जोखिम र अर्कातिर ग्लोबल वार्मिङका कारण यस्ता विपदाहरुसँग अब संसारले पटकपटक सामना गरिरहनु पर्ने हुन्छ । नेपालको राजधानी नै अर्को सुरक्षित ठाँउमा सार्नुपर्ने विषयमा पनि गतिशील हुनु विलम्ब भइसकेको छ । जनघनत्वले भरिपूर्ण काठमाडौं उपत्यकाको भूबनौटको अध्ययन गर्दै विपदासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सुरक्षित बसोबासको व्यवस्थापन, साँघुरो बाटोघाटोको सुव्यवस्था गर्नु समेत नितान्त आवश्यक भइसकेको छ ।
त्यसो त सरकारको टाउकोमा यसबेला ठूलो अभिभारा छ । विचल्लीमा परेका जनताका लागि विविध व्यवस्थापन गर्नु सरकारको परम दायित्व हो । अर्कातिर हामी नेपालीको परमकर्त्तव्य चाहीं यसबेला तन वा मन वा वचन वा धन अर्थात् जोसँग जे छ त्यहीले सरकारलाई सहयोग पुर्यापउनु हो । राष्ट्रिय सङ्कट भनेको हरेक नेपालीको सङ्कटको घडी हो । त्यसैले आआफ्नो क्षमता अनुरुप सकेको सेवा, सहयोग, सद्भावना सरकारप्रति राख्नु यसबेलाको नेपाली धर्म हो ।
नेपाललाई सहयोग गर्न उचालिएका विदेशी दाताका हातहरु अहिले विविध बहानामा सरकारी कोष बाहिरबाट सहयोग गर्ने अड्डिमा लागेको सुनिन थालेको छ । हिंजोका दिनमा नेपाली जनताका नाउँमा संसारभरिबाट पैसा सोहोरेका सुरसा मुखधारी अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु फेरि अथाह मुद्राको स्वादमा मुख मिट्ठ्याउन लागेको आभास भइरहेको छ । यसबेला सरकारले दह्रो भएर अडान नलिए आहात जनताको नाऊँमा आएको राहतको पैसाको पुनः दुरुपयोग हुने संभावना प्रबल छ । अविकशित मुलुकका नाउँमा पैसा लिएर त्यसैमा हालिमुहाली गर्ने अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालको चलखेल हाम्रो विपदग्रस्थ नेपालका लागि पनि शुरु भइसकेको छ । त्यसैले यसबेला सरकारका महत्वपूर्ण ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरुले लोभ र पापबाट टाढा बस्न जरुरी छ । इतिहासले यसबेलाको सरकारलाई चुनौति र अवसर दुबै दिएको छ । अहिलेको सरकारले असल काम गरेर जनजनको हृदयमा बस्दै राष्ट्र पूनर्निर्माताको नाउँ स्वर्णाक्षरमा लेखाउने अथवा नकाम गरेर अपराधी स्वरुपमा पुस्तौंपुस्ताको धिक्कार खाने - इतिहासको महत्वपूर्णसमयमा सरकार उभिएको छ । कर्मपथमा डटेर लाग सरकार ! सावधान सरकार ! इमान्दारितापूर्वक राष्ट्रको पूनर्निर्माणमा समर्पित बन् सरकार !
यसबेला हामी सम्पूर्ण नेपालीले मात्र नेपाली हुनुपर्छ । यस्तो राष्ट्रिय सङ्कटको समयमा हामी नेपालीले जातजाति, भाषाभाषी अथवा कुनै पनि दलगत विभाजनमा पर्नु भनेको आफैंले आफूप्रति गद्धारी गर्नु हुनेछ । सम्पूर्ण नेपालीहरु एक ढिक्का भएर कर्मपथमा लम्केपछि हाम्रो शोक शक्तिमा परिणत हुन बेर लाग्ने छैन